ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » သင့်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ profile ဓာတ်ပုံနှင့်အတူအထင်ကြီး
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: နိုဝင်ဘာ. 18 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
သင်သည်သင်၏အွန်လိုင်း profile နဲ့ပေါင်းသင်းဓာတ်ပုံသင်၏ရွေးချယ်မှုကိစ္စကယ့်ကိုမထင်ခဲ့လျှင်, နောက်တဖန်အထင်. အဆိုပါအချက်ကိုပရိုဖိုင်းဓာတ်ပုံသည့်အွန်လိုင်း dater သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ profile တစ်စက္ကန့်ကြည့်ပေးပါလိမ့်မည်ရှိမရှိအဆုံးအဖြတ်အတွက်အဓိကအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်. ထိုအသင့်ပရိုဖိုင်းကိုအတူဓာတ်ပုံပေါင်းသင်းခြင်းမစဉ်းစားခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်, မည်သည့်တုံ့ပြန်မှုများကိုရရန်မမျှော်လင့်ပါဘူး. အတော်များများဟာအွန်လိုင်း daters ဓာတ်ပုံများနှင့်အတူလူကသာပြသရလဒ်များကိုမှအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ profiles များအားလုံးမှတဆင့်၎င်းတို့၏ရှာဖွေမှုကိုသတ်မှတ်. အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ပရိုဖိုင်းဓာတ်ပုံအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့လောကီသားတို့သည်အတွက်သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုဆုံးဖြတ်ရာတွင်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်တယ်.
သင့်ရဲ့အူတုံ့ပြန်မှုသင့်ရဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ profile ကိုအဘို့သင့်ဓာတ်ပုံရွေးချယ်တဲ့အခါကိုယ့်ကိုကိုယ်ကိုသင်တို့အားရှိသည်အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားဆုကိုတက်ထားရန်ဖြစ်စေခြင်းငှါ. သင်သည်ကိုယ်ကိုအပြီးအားလုံးအွန်လိုင်းတတ်နိုင်သမျှဆွဲဆောင်မှုကြည့်ရှုစေလိုကြောင်းနာ​​းလည်နိုင်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, သင်ကနေ့စွဲညာဘက်ကိုရှာဖွေနေပါသည်? ကောင်းစွာ, ဒါကြောင့်သင်တကယ်ကြည့်ရှုမည်သို့အနည်းငယ်ပိုကိုယ်စားလှယ်ကြောင်း Profile တစ်ခုကောက်ဖို့ပိုကောင်းတဲ့စိတ်ကူးဖြစ်စေခြင်းငှါ,, မသင်ကြည့်ရှုလိုလိုဘယ်လို.
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, ပရိုဖိုင်ဓာတ်ပုံအွန်လိုင်းအလားအလာပွဲစဉ်အဖြစ်နောက်ထပ်ချဉ်းကပ်ဖို့ယောက်ျားမိန်းမစည်းရုံးသိမ်းသွင်းသောအဓိကအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. သင်တိကျစွာသင်တကယ်ကြည့်ရှုဘယ်လောက်ကိုကိုယ်စားပြုမပါဘူးတဲ့ဓာတ်ပုံကိုတက်သွင်းခဲ့လျှင် (သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုတော်တော်များများအသက်, သင်ရပြီ 20 သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုယူကတည်းကပေါင်, သို့မဟုတ်သင်၏ဓာတ်ပုံသင်ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုကြည့်ရှုစေခြင်းငှါပြောင်းလဲလာတဲ့ခဲ့သည်) သင့်ရဲ့နေ့စွဲလွှဲမရှောင်သာသင်ကြည့်ရှုမည်သို့မှားစွဲမှတ်ရလိမ့်မယ်. သူသို့မဟုတ်သူမမျှော်လင့်ခဲ့ကြတာထက်သင်တို့အလူကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံသည့်အခါသင့်ရက်စွဲ disappointing နှင့်ညာဘက်လင်းနို့ဖြတ်ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဖွံ့ဖြိုးမြင့်တဲ့စွန့်စားမှုကို run အတော်လေးအနည်းငယ်ကွာခြားကြည့်ရှု.
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုလက်တွေ့ကျကျနှင့်ချော့မော့သောနှစ်မျိုးစလုံးသေချာအောင်လုပ်ပါ. သင်တကယ်ကိုကြည့်ရှုဘယ်လိုအကြောင်းတိကျမှန်ကန်မှုမရှိခဲ့လို့ရိုက်ချက်မပေးချင်ကြဘူးသော်လည်း, သတိရ, သင်ဆဲရက်စွဲတစ်ခုရရန်ကြိုးစားနေကြသည်. သင်တစ်ဦးဆံပင်ညှပ်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်မိတ်ကပ်အပေါ်ထားရန်မေ့လျော့သောနေ့ရက်ကာလကိုအဘို့အနှောင်းလေးလရှိစဉ်အခါအချိန်သင့်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ profile တွင်တစ်ဦးပုံကို post မထားပါနဲ့. သင်တို့တွင်အဓါတ်ပုံတွေကတော့ကောင်းတစ်နေ့၌သင်သည်အဘယ်အရာနှင့်တူ၏လက်တွေ့ကျသောယောင်ထင်နေစဉ်သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးတွေကိုနှုတ်ဆောင်သောမိတ်ဆွေတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုမေးကြည့်ပါ.
သင်ကိုယ်တိုင်၏မျိုးစုံဓါတ်ပုံတွေကိုတက်ထားရန်ထို option ကိုရှိပါက, ထိုသို့ပြု. သင့်ရဲ့အဓိကပရိုဖိုင်းဓါတ်ပုံအဘို့အသင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်ကို browser များသင်အဘယ်အရာနှင့်တူ၏ကောင်းတစ်ဦးသဘောအရနိုင်အောင်anice ဦးခေါင်းနှင့် sholder ရိုက်ချက်ကတော့ရရန်ဖြစ်နိုင်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်. ဒါပေမဲ့, သင့်ရဲ့ပိုထူးခြားတဲ့ features နှင့်စရိုက်များကိုအချို့ချွတ်ပြသနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အမျိုးစုံဓာတ်ပုံ option ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး. သင်ပျော်စရာရှိခြင်းကိုပြသသောဓာတ်ပုံကိုရွေးပါ, ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ခြင်း, သို့မဟုတ်အဆင်းလှကသဘာဝ setting တွင်လောကအတွက်.
အပိုဆောင်းအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ profile ဓာတ်ပုံအကြောင်းသိကောင်းစရာများ
– အခြားလူများနှင့်တကွသင်ဓါတ်ပုံများကိုတက်မတင်ပါနဲ့. သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်ကို browsing ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်နေသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမသိစေခြင်းငှါသင်တို့နှင့်အတူအသွင်ဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှဆွဲဆောင်စေမည်အကြောင်း.
– သင်သည်သင်၏ဓာတ်ပုံတွင်ပြုံးနေကြတယ်သေချာအောင်လုပ်ပါ. သင်ကအလားအလာမီးခြစ်သင်ပျော်ရွှင်ပြီးအပြုသဘောဆက်ဆံရေးဟာစတင်နိုင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီပျော်ရွှင်သူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းထင်မြင်ပေးချင်.
– သင့်ရဲ့အလုပ်သို့မဟုတ်နေထိုင်မှုနေရာနှင့် ပတ်သက်. ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်တွေကိုထုတ်ဖေါ်သောဓာတ်ပုံ post မထားပါနဲ့. သင်သည်သင်၏ရုံးအဆောက်အဦးမှတစ်ဦးသည်နိမိတ်လက္ခဏာကိုဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်လိပ်စာကိုနှင့်သင်၏အိမ်သူအိမ်များ၏ရှေ့မှောက်၌ရပ်နေသည်ကိုသင်တို့၏ရုပ်ပုံ post မယ်ဆိုရင်, သင်ချင်တယ်ထက်သင်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အဖွဲ့ဝင်များအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းခံရကြမည်အကြောင်း,. တတ်နိုင်သမျှအမည်မသိသင်၏ဓာတ်ပုံကိုသိမ်းဆည်းထားပါ.
– သင်သည်သင်၏ဓာတ်ပုံရွေးချယ်တဲ့အခါအခြားသူများအားဖော်ကျူးချင်တဲ့အရာကိုသတိရပါ. သင်ရေသောက်ခြင်းအရက်မူး၏ဓါတ်ပုံတွေကိုတက်မတင်ပါနဲ့, ကင်မရာကိုဖိတ်တောက်နေ, သို့မဟုတ်သင်တစ်ဦးသည်ကြီးလေးသောစိတ်ကူးယဉ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုရှာဖွေနေပါသည်လျှင်ငှက်အလျောက်လှည့်.